ज्योतिष शास्त्रका अनुसार यस्ता युवतिहरू हुन्छन् निकै नै भाग्यशाली । जानिराख्नुहोस् – Allindiabc
August 11, 2019 by allindiabc
एजेन्सी । ज्योतिष शास्त्रको आफ्नै एउटा छुट्टै महत्त्व रहेको हुन्छ । ज्योतिष शास्त्रमा असल गुण भएकी कन्याका बारेमा वा भाग्यशाली यसवतीका बारेमा व्याख्या गरिएको छ । युवतीहरूमा हुने आकार, चिन्ह, शरीरका विभिन्न ठाउँमा भएका कोठीहरू आँखा सम्झदारी, चलाख, स्वभार र शरीरका विभिन्न भागहरूमा हुने विभिन्न कुराहरूलाई यहाँ ब्यख्या गर्न खोजिएको छ । कस्ता युवती अत्यन्त भाग्यशाली हुन्छन् त ? यस बारे थाहा पाइराख्नुहोस् ।
समुन्द्र शास्त्रका अनुसार जुन कन्या को खुट्टाका औंला उठेको, गोलो, रातो रातो देखिन्छ त्यस्ता कन्या भाग्यशाली हुन्छन् । जुन कन्याको कुर्कुच्चामा सर्पको आकार हुन्छ त्यस्ता कन्या भाग्यशाली हुन्छन् यस्ता कन्यालाई सधैं इश्वरको कृपा रहीरहेको हुन्छ । जुन कन्याको पैतालामा त्रिकोण को चिन्ह हुुन्छ ति कन्या अत्यधिक चलाख हुन्छिन भनिएको छ । यस्ता कन्याले आप्mनो बुद्धि र समझदारीले सम्पूर्ण परिवारलाई खुशी राख्न सक्छिन् ।
नाभिको तल्लोपट्टि कोठी भएका कन्याहरु भाग्यशाली एवम् सुखी जीवन विताउने हुन्छन् । जुन कन्याका आँखा हरिणका जस्ता समान हुन्छन् सेतो भागको अन्तमा हल्का रातो हुन्छ यस्ता कन्या भाग्यशाली र सुखभोग पाउने हुन्छन् । जुन कन्याको जिब्रो रातो र कोमल हुन्छ उ आफूले त सुख भोग गर्छिन् नै सम्पूर्ण परिवारलाई पनि सुख प्रदान गर्न सक्ने हुन्छिन् ।
जुन कन्याको नाभी गहिरो र भित्रैबाट उठेको जस्तो देखिन्छ त्यस्ता कन्या पनि आफु र आफ्ना परिवारलाई सुख दिने खालकी हुन्छिन् । नाकको अघिल्लो भागमा कोठी हुने कन्या धन धान्यले पूर्ण हुन्छिन् । पैतालामा कमल चक्र एवम् शङ्खका चिन्ह हुने कन्या शुभफलदायी मानिन्छिन् । यस्ता कन्याका पति कि त ठूला व्यापारी कि त राजनेता हुन्छन् ।
Prev“डर होइन, जहाज उडाउन पाउँदा गर्वको महसुस हुन्छ” -पाइलट पेमा लामा (भिडियो सहित रमाइलो कुराकानी )
Nextबालबालिकालाई कसरी सिपालु बनाउने ? हरेक अभिभावकले पढ्नैपर्ने कुरा!